"बुबा, तिहारमा हामीलाई नयाँ नाना किनिदिने भनेको हैन । खै त नयाँ नाना?" पाँच वर्षकी ठूलीले भनिन् ।
"मलाई पनि नयाँ नाना !" माइलीले पनि के कम, दिदीको स्वरमा स्वर मिलाएर भनिन् ।
"म पनि नयाँ नाना लाउने !" दुई वर्षकी सानीले पनि दिदीहरूको लोलीमा बोली मिलाउँदै भनिन् ।
दिदीहरूको रहर र आमा बुबाको गरीबीको कहरबाट अनभिज्ञ रही एक वर्षको साने बोराको झुलुङ्गोमा मस्त निदाइरहेको थियो । झोक्रीएर पीँढीमा बसेको बाबुको वरिपरि बसेका तीन छोरीहरूका आँखामा आशाoutdoor event tent र गुनासो भरिएको छ ।
वीर बहादुर हो उसको नाम । वीरे कान्छा बन्यो ऊ, गाउँभरिका साना ठूला सबैका लागि । कहिलेदेखि हो हेक्का भने छैन उसलाई । बनिबुतो गर्छ ऊ र त्यसैबाट पाएको ज्यालाले चार जना भन्टाङ्गभुन्टुङ्गसहितको आफ्नो आधा दर्जन परिवारको पेट जेनतेन भर्छ ।
उसकी पत्नी कान्छी । कान्छाकी पत्नी भएकीले सबैको लागि उनी भइन् कान्छी । कसैले सोधेन उनको नाम । अनि कुनै बेला उनलाई सेतिमाया भनेर पनि बोलाउँथे भन्ने कुरो उनले बिर्सिसकिन् । अब त उनलाई आफ्नो नामसँग कुनै सरोकार छैन । सरोकार छ त केवल कामको, अनि छोराछोरीको पेट भर्ने मामको । एकदुई घरमा भाडा माझ्छिन् । बर्षेनी बच्चा जन्माएर नरकट बनेको शरीरले थेग्न नसके पनि वीरे कान्छाको आधा भार आफ्नो काँधमा थामेकी छिन् उनले ।
यसो बेला-बेला काम गर्ने मालिक्नीहरूले दयाले दिएको जडौरीले लाज ढाक्ने र जाडो छेक्ने एक गतिलो आधार बन्नुलाई उनीहरूले अहोभाग्य मानेका छन् । केटाकेटी र वीरे कान्छाको शरीरले नयाँ लुगाको स्वाद चाख्न नपाएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । लगभग पाँच वर्षअघि नयाँ लुगाको नाममा भित्री गन्जी र हनुमान कट्टु सिलाएर लगाएको थियो उसले । यसपाली दशैंमा केटाकेटीले नयाँ नाना किनिदिनु भन्दा उसले "नकराओ है तिमीहरू !" भन्दै हकारेको थियो । तर, पछि आफैलाई पछुतो भयो र सोच्यो - बेकारमा केटाकेटीसँग कराएँ । बिचराहरू के दोष ! यी त नाबालक, के थाहा यिनीहरूलाई बाउको हविगत ! अरुले लाएको, खाएको देखेर बिचराहरूलाई पनि लाउन र खान मन लागिहाल्छ । त्यसैले त केटाकेटी भनिएका ! बुझ्ने भए त ठूला मान्छे भैहाले नि ।custom party tent
केहीबेर सोचमग्न भएपछि अचानक केही सम्झेझैं उसले सोच्यो - भोटो भए पनि सिलाइदिनु पर्ला । अनि हाँस्दै उसले भनेको थियो "ल, ल ! अब तिहारमा सिलाइदिउँला तिमीहरूलाई नयाँ लुगा।"
यसपालिको तिहारमा ठूलीकी दिदीबहिनी नयाँ लुगा लगाएर भैलो खेल्न जाने भनेर खुशी भएका छन् । तिहार कहिले आउला भन्दै दशैंदेखि नै औंलामा गन्न शुरु गरेका थिए । नभन्दै आज त कुकुर तिहारको सिङ्गो दिन बितेर साँझ पर्न लागिसकेको छ । भोलि त लक्ष्मीपूजा । सङ्घारमै तिहार आइसके पनि न नयाँ लुगा नै आयो, न त वीरे कान्छाले नै त्यसबारे कुनै कुरो गर्‍यो । नयाँ लुगा भित्रिने कुनै सुरसार नदेखेर बुबाले बिर्सिनु भो कि भनेर ठूली छोरीले झोक्रिएर बसेको वीरे कान्छालाई सम्झाएकी हुन् ।
पाँच वर्षअघि आफूले एउटा जुक्ति लगाएर नयाँ लुगा लगाएको सम्झिएर यसपालि पनि त्यही जुक्ति काम लाग्ला भन्ने सोचेर वीरे कान्छाले छोरीहरूलाई नयाँ नाना हालिदिन्छु भनेको थियो । त्यो जुक्तिले यसपालि काम गर्लाजस्तो छाँट देखेन उसले । तैपनि छोराछोरीलाई आशा देखाइसकेको हुनाले अन्तिम आश भने मार्न नसकेर झुत्रो बनेको टोपी मिलाउँदै ऊ बाहिर जान तयार भयो । त्यो देखेर कान्छीले सोधिन्, "साँझमा कता हिँड्न लागेको अब ?"
"म एकछिनमै आउँछु," भन्दै ऊ हिँड्यो । छोरीहरू बुबा नयाँ नाना लिन जानुभयो भनेर खुशीले बुबा बाहिर गएको हेरिरहे ।
बेलुकी भो । छोराछोरी खाएर सुतिसकेका छन् । ठूली त बुबालाई कुरेर बसिरहेकी थिइन् । कान्छीले "नसुतेर किन?" भनेर कराएपछि उनी पनि पल्टिइन् । बुबा अब आउनुहोला र नयाँ लुगा हेर्छु भन्दाभन्दै भुस्सुक्कै निदाइन् ।top
आधारात बितिसक्दा पनि वीरे कान्छा फर्केका छैनन् । पर्खेर बसेकी कान्छी पनि अलिकति भएको मटि्टतेल पनि सकिन्छ भनेर टुकी निभाएर पल्टिन् । मनमा अनेकन शङ्का-उपशङ्का उठ्न थाल्छ । साँझमा नजानु भन्दाभन्दै wedding tents for sale हिँडेको मान्छे, मध्यरात भइसक्यो, अझ फर्किएको छैन । जतिजति रात छिप्पिदै जान्छ, उनको मनमा डर पनि त्यतित्यति नै गड्दै जान्छ ।
यस्तै सोच्दै थिइन् कि बाहिर कुकुर भुकेको आवाज आयो । उनका कान चनाखा भए । केही बेरमै "ठूलीकी आमा" भन्दै वीरे कान्छा भित्र छिर्‍यो ।
बल्ल कान्छीको सासमा सास आयो । अनि, "कालबेला ठीक छैन । यति रातिसम्म काँ गै'रा ? आफ्नो त आधा मासु भैसक्यो पीरले ।" हकारेको स्वरमा कान्छीले कराइन् र टुकी बालिन् ।
निद्रामा पनि बुबाले नयाँ लुगा ल्याउनुहुन्छ भन्ने सोचेर पर्खेर बसेकी थिईन् होली ठूली । आमा कराएको सुनेर उनी पनि ब्युँझिन्। बाबुको हातमा पोको देखेर उनी खुशी भइन् ।
वीरे कान्छाले खुइया लामो सास फेरेर भन्यो, wedding tents for sale "के गर्नु ठूलीकी आमा ! केटाकेटीलाई तिहारमा नयाँ लुगा हालिदिन्छु भनेको थिएँ । त्यसैको जोहो गर्न गएको नि । यसपालि भने मेरो पाँच वर्षअघिको जुक्ति कुनै काम लागेन ।"
हातको पोको कान्छीलाई देखाउँदै वीरे कान्छाले भन्यो,
"पाँच वर्षपहिले त चोक चोकमा टाँगेका ब्यानरहरू निकालेर अक्षर नछापिएको भाग काटेर काले दमाईलाई भनेर भित्री लुगाहरू सिलाउन लगाएको थिएँ । यसपालि पनि त्यसै गरेर केटाकेटीलाई लुगा सिउने कपडाको जोहो गर्छु भन्ने सोचेको त खै कतै पनि कसैले ब्यानर झुण्ड्याएका रहेनछन् ।"
wedding tent "अनि त्यो पोको चैं के हो नि ?" कान्छीले सोधिन् ।
"ए यो ? यो खै के जाती हो, त्यसको बाजेको छाला जस्तो । एउटा गाडीमा राखेको रहेछ । केही नपाएपछि यो पनि काम लाग्छ भनेर लिएर आएँ नि ।" वीरे कान्छाले फ्लेक्सका ब्यानर खोलेर देखाउँदै भन्यो, "यो भएपनि झयालबाट हावापानी छेक्न र केटाकेटीले जाडोमा भुइँमा ओछ्याएर बस्नहुन्छ भनेर लिएर आएँ नि ।"
भोलि औंसीको रात । दियोको जगमगले उज्यालो बना
wedding tents rental उनेछ तर ठूलीको अनुहार भने आजै अँध्यारियो । उनीहरूका मुहार उज्यालो बनाउने नयाँ लुगा भने आएन यसपाली पनि ।